(၃)လအတွင်း မြန်မာအလုပ်သမား ၅သောင်းကျော် ပြည်ပတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိ
news Eleven Myanmar, 18 Apr 2018 (3 years ago )
လွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အမိမြေမှ ထွက်ခွာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။ ယခုနှစ်၌ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံသများသို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ထွက်ခွာသူမြန်မာနို...
news The New Light of Myanmar, 18 Aug 2014 (7 years ago )
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအသင်းနှင့်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအသင်းတို့သည်သြဂုတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှ(၁၇)ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သော(၅)ကြိမ်မြောက်အ စည်းအဝေးအတွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည့်စာချုပ်မူကြမ်းထဲရှိစာပုဒ်(၃၁)ပုဒ်မှ(၂၆)ခုကိုသဘောတူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဦးလှမောင်ရွှေမှကျ...
(၆ ၆) ကြိမ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနား လွိုင်ကော်တွင် ကျင်းပမည်
news The Global New Light of Myanmar, 03 Jan 2018 (4 years ago )
(၆၆)ကြိမ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ကို ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ရှိ ကန္တာရဝတီကွင်းတွင် ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့မှ(၁၉)ရက်နေ့ထိ အခမ်းအနားကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်။ အခမ်းအနားတွင် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ၊ အလှပြိုင်ပွဲများ၊ စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲများ၊ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲများနှင့် ရိုးရာအားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ အစား...
news Karen Information Center, 08 Nov 2018 (3 years ago )
(၆၃)နှစ်မြောက် ကရင်ပြည်နယ်နေ့ကို ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအေးသာအောင် နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရရုံးဝင်းအတ...
news Burma New International, 22 Jan 2018 (3 years ago )
တပို့တွဲလဆုတ် ၁ ရက်(၁-၂-၁၈) နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၇၁) ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပ ရေး မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့က ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀ဝ) ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း သိရသည်။ “မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီး စုစုပေါင်း သိန်း (၅၀ဝ) ထောက်ပံ့ပေးမယ်။ ဒီ သိန်း (၅၀ဝ) ထဲမှာ ဗဟိုက အာလုံးရတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲထဲမှာ...
news The Global New Light of Myanmar, 03 Jun 2017 (4 years ago )
Yangon Bus Service (YBS) is expanding its ride service with the addition of 1,000 new buses within the next two weeks, according to an announcement by the Yangon Region Transport Authority. (YRTA) in Friday’s editions of The Mirror Daily. The Yangon region government purchased 500 new buses ...
news The Irrawaddy, 27 May 2019 (2 years ago )
MANDALAY—Over 1,300 villages in rural areas of five regions will get access to electricity through solar power in fiscal 2019-20 as part of the National Electrification Project (NEP), according to the Ministry of Electricity and Energy. The ministry will team up with the Rural Development Depart...
A total of 1,883 prisoners were released on Wednesday ahead of Myanmar’s new year water festival which is to start on Thursday, Myanmar State Counsellor’s Office announced. The 1,883 prisoners, including 233 women, were freed from prisons across the nation to enable them enjoy cut of prison term...
1000 acres bamboo cultivation zone to be established
news Myanmar Times, 13 Aug 2018 (3 years ago )
About 1000 acres of bamboo cultivation zone will be established in Nay Pyi Taw and the government is set to help entrepreneurs upgrade their bamboo products, U Kyaw Thu, secretary of Myanmar Bamboo Growers Association told The Myanmar Times. The land of bamboo growers is being measured and consol...
In order to improve education prospects for children with intellectual disabilities, the Myanmar Special Education Association (MSEA) has announced plans to pay for up to 1000 teachers across the country to undergo specialized training in 2017. The exclusion of, discrimination against and lack of...